ထိုင်ဝမ်သို့ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက် - Xinhua News Agency
အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်များသည် စစ်လေယာဉ်တစ်စင်းဖြင့် ထိုင်ဝမ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း နှင့် ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“ အမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို စိတ်လိုလက်ရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နက်ကို အမှန်တကယ် ယုတ်လျော့အောင်လုပ်ဆောင်မှု နဲ့ ထိုင်ဝမ်ဒေသမှာ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို အလွန်းဆိုးရွားတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု ပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Tan Kefei က ပြောကြားခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ်သည် အလွန်အရေးပါပြီး ဖယ်ထုတ်၍ မရသော တရုတ်နိုင်ငံအချုပ်အခြာပိုင်နက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ အမေရိကန်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ရန်စတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ချက်ချင်းရပ်တံ့ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးပါတယ် ၊ အလုံးစုံပျက်စီးရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ထိုင်ဝမ်ဒေသမှာ တင်းမာမှုတွေ ရှေ့ဆက်ပိုမြင့်တက်လာအောင် ဦးတည်စေပါတယ်၊ ပြီးတော့ ထိုင်ဝမ်ခွဲရေးထွက်ရေးဝါဒီတွေအတွက် မှားယွင်းတဲ့ အချက်ပြမှုပေးပို့နေတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်” ဟု Tan က ဆိုသည်။
ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီမှ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် အခြေအနေကို မှားယွင်းစွာ ကောက်ချက်ချခြင်းမပြုမိရန် (သို့မဟုတ်) အန္တရာယ်ကြီးမားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ မပြုမိရန် ၊ ထိုအရာက ထိုင်ဝမ်အား ကပ်ဆိုက်မှုကိုသာ ယူဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း Tan က သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ သန္နိဌာန် ၊ နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေစိုးမိုးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ ခွန်အားပြည့်စွမ်းပကား နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဖြေရှင်းမှုကို ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ လျှော့မတွက်သင့်ပါဘူး ” ဟု Tan က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည် အမြင့်ဆုံးအဆင့်တပ်လှပ်ထားကြောင်း နှင့် မည်သည့်ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုမဆို (သို့မဟုတ်) “ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” အတွက် မည်သည့်ခွဲထွက်ရေးဝါဒီကြိုးပမ်းမှုကိုမဆို ခြေမှုန်းဖျက်ဆီးပစ်ရန် အားလုံးသောလိုအပ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
China firmly opposes U.S. lawmakers’ visit to Taiwan: defense spokesperson
BEIJING, Nov.9(Xinhua) — A Chinese defense spokesperson on Tuesday expressed strong opposition to and condemnation ofavisit to Taiwan by members of the U.S. Congress who arrived inamilitary airplane.
“The U.S. act has wantonly interfered in China’s internal affairs, seriously undermined China’s territorial sovereignty and posedasevere threat to peace and stability in the Taiwan region,” Tan Kefei, spokesperson for China’s Ministry of National Defense, said while reiterating that Taiwan isasacred and inalienable part of Chinese territory.
“We sternly warn that the United States must immediately stop its provocative actions and all destructive moves that lead to the further escalation of tensions in the Taiwan region, and refrain from sending false signals to ‘Taiwan independence’ separatists,” Tan said.
Taiwan’s Democratic Progressive Party authority must not misjudge the situation or take desperate moves, which will only bring disaster to Taiwan, Tan warned.
“No one should underestimate the Chinese people’s staunch determination, strong resolve and powerful capability to defend national sovereignty and territorial integrity,” Tan said, adding that the People’s Liberation Army remains on high alert and will take every necessary measure to crush any external interference or any form of separatist attempts for “Taiwan independence.” Enditem
Tan Kefei, the seventh spokesperson of China’s Ministry of National Defense. Photo: website of Ministry of National Defense